Siigeysiga - ma dambi baa sida waafaqsan Baybalka?
Waa maxay masiixi? Ilaah ma Jiraa? Waa kuma Ciise Masiixi?
Su’aal: Siigeysiga - ma dambi baa sida waafaqsan Baybalka?
Jawaab: Baybalka marnaba si cad uma sheegin siigeysiga ama xaaladaha haddii ama ay tahay siigeysiga dambi. Baybalka inta badan wuxuu tilmaamaa sida la xiriirto siigeysiga waa sheekada Onan ee Bilowgii 38:9-10. Qaar ka mid ah waxay u fasiraan mareenka sida dhahitaanka in “daadinta shahwadaada” ee dhulka ay dambi tahay. Si kastaba, taasi si hufan uma ahan waxa mareenka dhahayo. Illaah wuu cambeereeyay Onan ma ahan “daadinta shahwadiisa” laakin sababtoo ah Onan wuu diiday in la buuxiyo waajibaadkiisa ee siiyaa dhaxalka walaalkiisa. Mareenka kuma saabsano siigeysiga, laakin badelkii buuxinta waajibaadka qoyska. Mareenka labaad mararka qaar waxaa la isticmaalay cadeynta siigeysiga inay dambi tahay waa Matayos 5:27-30. Ciise wuxuu ka hadlay lahaanshaha afkaaraha dhileysiga iyo kadib dhahayt, “Haddii gacantaada midig ee kugu sababtay dam,biga, iska goy oo iska tuur.” Iyada ay jiraan fuustooyin u dhaxeeyo mareenkaan iyo siigeysiga, waa nasiib daro in siigeysiga uu ahaa waxa Ciise uu soo jeedinayo.
Iyada oo Baybalka halkaan si cad u sheegayo in siigeysiga inay dambi tahay, ma jiraan wax su'aalo ah sida haddii tallaabooyinka u hogaamiyo siigeysiga inay dambi tahay. Siigeysiga wuxuu ku dhawaad yahay marwalba natiijada afkaaraha dhileysiga, kicinta galmada, iyo/ama sawirada qaawan. Waa dhibaatooyinkaan oo u baahan in lala macaamilo. Haddii dambiyada dhileysiga, afkaaraha sineysiga, iyio sawirada qaawan way ka deyriyeen oo ka adkaadaan, siigeysiga waxay noqoneysaa wax aan arin aheyn. Dad badan waxay la dhibaatoodaan dareemaha dambiga ee la xiriiro sIIgeysiga, markii lagu jiro xaalad dhab ah, waxyaabaha u Hogaamiyay falka waY ka fogtahay ka towbadkeen.
Waxaa jiro qaar ka mid ah mabaad’ida baybalka ee lagu isticmaali karo arinta siigeysiga. Efesos 5:3 wuxuu ku dhawaaqay, “Kuwa adiga kaa mid ah waa inaanan xittaa noqon tilmaanta galmada dambiga, ama nooc walba ee daahirayaha nijaasta.” Way adagtahay in la arko sida siigeysiga ay u mari karto baaritaankaas gaarka ahr. Baybalka wuxuu na barayaa inaga, “Marka haddii aad cuntid ama cabtid mar walba oo aad sameysid, ku sameey dhammaan ammaanta for Illaah” (1 Korintos 10:31). Haddii aadan siin karin Illaah ammaanta oo wax ah, waa inaadan sameynin. Haddii qofka uusan si buuxdo uga dhaadhacsantahay in howl ay faraxgelineyso Illaah, kadib waa dambi: “Wax walba ee aanan ka imaanin aaminaada” (Rooma 14:23). Waxaa intaas dheer, waxaan u baahannahay inaan xasuusano in jirkeena la yareeyay oo Illaah leeyahay. “Ma ogtahay in jirkaaga uu yahay dhismaha caabudka ee Ruuxa Quduuska, ee adiga kugu jiro, ee aad ka heshay Illaah? Ma tihid nafsadaada; waxaad iibsatay qiimaha. Sidaas darteeda ku sharafeey Illaah jirkaaga” (1 Korintos 6:19-20). Runtaan dhabta ah waa inay lahaataa dhalis dhab ah ee waxa aan ku sameyno jirkeena. Sida la xiriirto mabaadi'daan, gabagabada in siigeysiga uu dambi yahay waa baybalka. Si cad, siigeysiga ma ammaanayo Illaah; kama fogaado muuqaalka sinnada, mana marto imtixaanka Illaah oo leh milkiilanimada Illaah ee jirkeena.